Naseho ny : 17 jona 2020
Ady saritaka no natrehan'i Dera tao anatin'ny fifanjevoan'ny zandary sy ny mpangalatra omby. Efa namoy fo izy, fa izay no fara androny, kanjo niarahaba tena fa nieren-doza. Tsy nahomby araka ny niheverany azy ilay diany tany Tsiroanomandidy. Fanadinoana ny zava-dratsy rehetra nihatra taminy no notadiaviny, aina tsy maty no nentiny nody.
Naseho ny : 16 jona 2020
Ilay fisindana noeritreretina mba hamalifaliana ny tena, vao mainka nitondrana loza. Tafiditra tao anatin'ny vovon'ny dahalo mpangalatra omby indray i Dera. Ary tsy afaka tamin'izany raha tsy nandoa ny variraiventy farany.
Naseho ny : 13 jona 2020
Nifanesisesy ireo andro ratsy tamin'i Dera. Efa te hody any amin'ny vady aman-janany izy fa te hamaly zava-mahafalifaly ireo rehetra nanjo azy aloha, ka te hisinda kely an'Antananarivo. Any Tsiroanomandidy izy vao nijanona.
Nihakivikivy indray i Dera ary nanontany tena ny amin'ny fisian'ny rariny eto ambonin'ny tany. Tsara no nataony kanefa dia fahavoazana mandrakariva no mihatra aminy. Onena ny tenany izy ary nila ho latsa-dranomaso. Na inona na inona miseho eto Antananarivo, izy foana no trany.
Pejy 5 amin'ny 58